प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स बोलायो साधारणसभा, के-के छन् प्रमुख एजेण्डा ?
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ ।
कोरोना महामारीकै बीचमा साउनमा १० अर्ब भन्दा बढि जीवन बीमाशुल्क आम्दानी
कोरोना महामारीकै बीचमा नेपालमा सञ्चालित १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि बीमा शुल्क आम्दानी गर्न सफल भएका छन् ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुको जीवन बीमा कोष ३ खर्ब नजिक,
कुनको कति ?आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा नेपालमा संचालनमा आएका १९ जीवन बीमा कम्पनीहरुको जीवन बीमा कोषको आकार २ खर्ब ९६ अर्ब पुगेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि जीवन बीमा कोषलाई निकै महत्वपूर्ण कोषको रुपमा लिईन्छ ।
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओमा पहिलो दिन कति पर्यो आवेदन?
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले बिक्रीमा ल्याएको आइपीओमा पहिलो दिन झण्डै ५० प्रतिशत शेयर खरिदको लागि आवेदन परेको छ। विक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलले दिएको जानकारी अनुसार साढे ४ बजेसम्ममा ४८. १५ प्रतिशत शेयर खरिदको लागि आवेदन परेको छ।
साउदी अरबमा मृत्यु भएका थिङलाइ नेशनल लाइफको दाबी भुक्तानी
वैदेशिक रोजगारको शिलसिलमा साउदी अरब गएका प्रयास थिङको आठ महिना नपुग्दै सडक दुर्घटनामा परी निधन भएको छ ।
बलियो बन्दै नेशनल लाईफ, जीवन बीमा कोषमा ३३ अर्ब, बीमा शुल्क आर्जन १६ प्रतिशतले बढ्यो
नेपाल लाइफको व्यतित बीमालेख नविकरणमा ब्याज छुट
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले व्यतित बीमालेख नविकरण गर्दा ब्याज छुटको स्कीम सार्वजनिक गरेको छ ।
बीमा अभिकर्ता पेशामा सफल हुने सुत्र
पछिल्लो समय जीवन बीमा अभिकर्ता पेशाप्रति आकर्षण बढ्दो छ । केहीले बैंकको जागिर, केही शिक्षक पेशा, केही त सरकारी पेशा नै छोडेर अभिकर्ता पेशामा जोडिएको पाईन्छ ।
आइएमई लाईफको आईपिओ तत्काल अघि नबढ्ने, किन रोकियो धितोपत्रमा आईपिओ ?
आईएमई लाईफले गत असारमा आईपिओको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गरेको भएपनि सो कम्पनीको आईपिओ सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न केही समय लाग्ने भएको छ ।
सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २० लाख ८० हजार रुपैयाँ बीमा दावी भुक्तानी गरेको छ ।